ilengela eweni i-saa - Ilanga News
Home Izindaba ilengela eweni i-saa
ilengela eweni i-saa
ONGOTI bezokutakula amabhizinisi asenkingeni abahlenga inkampani yezokundiza yakuleli, iSouth African Airways (SAA), basahlaziya umphumela wesinqumo sikahulumeni sokuchitha isicelo sabo sokuxhasa le nkampani ngo-R10 billion.
NgoLwesibili ongoti bathole incwadi ephuma ehhovisi likangqongqoshe womnyango wezinkampani zikahulumeni, ebithi uhulumeni ngeke akweseke ukwandiswa komkhawulo wokuboleka imali emazweni angaphandle ozowavumela ukuseka ngemali isu lokutakula le nkampani.
Ihhovisi likangqongqoshe lithi uhulumeni kawukwazi ukuhlinzeka imali eyengeziwe ukuze kuhlengwe uhlelo lokuyitakula, noma yesabelomali sokuyinakekela ngokwesiphakamiso salaba ongoti.
“Kungaleso sizathu thina njengabatakuli sethula umbiko odingekayo ngokwenzekayo kubo bonke abathintekile. Sihlaziya umphumela walokhu ohlelweni lokutakula futhi sizobika noma yingasiphi isinqumo esizokwenziwa ngokuhamba kwesikhathi,” kusho ongoti uSiviwe Dongwana noLes Matuson, encwadini yababolekisi ngoLwesibili.
Abatakuli bathi okwamanje inkampani iqhuba uhlelo lokuqashwa kwezindiza ukuhambisa abantu bamazwe angaphandle ukuya emazweni abo nokubuyisa ekhaya izakhamizi zakuleli ezingondingasithebeni kwamanye amazwe.
Ngaphezu kwalokho, isigaba sezokuthuthwa kwempahla sesinyuse imisebenzi yaso kulesi sikhathi, kubalwa nokuletha kuleli imishanguzo nezimfanelo ezidingekayo ekulweni negciwane iCovid-19.
Abatakuli, abaqashwe ngoZibandlela (Dece-mber) 2019 ngesikhathi inkampani ifakwa ngoku-zikhethela ohlelweni lokutakulwa, bathi uhulumeni ubumemezele ukuthi u-R4bn uyohlinzekwa ukuze inkampani ikwazi ukuhweba kuze kushaye umhla ka-31 kuMasingana (January) 2020.
Bathi uhulumeni wakhombisa ukuhlelwa kabusha kwenkampani okwakuzokwenza kugcineke kangcono imisebenzi ingabe isancika ekuxhasweni ngemali kahulumeni.
“isu lokutakula lalizodinga kusetshenziswe u-R7,7bn kanje; ukucazela ababolekisi, ukuhlela kabusha izindleko, izindleko zokudiliza izisebenzi neyokuhlela kabusha izinkampani ezingaphansi kwayo,” kusho bona.
Previous articleUjoyine Uzalo eseliphosa ithawula
Next articlei-supersport namafilimu ezemidlalo